Sei Train ndeimwe zvikuru Modes Of Transportation | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > Sei Train ndeimwe zvikuru Modes Of Transportation
Business Travel nechitima, Chitima Kufamba, Famba Europe
The polemic pamusoro kurovedza maringe bhazi mu Europe munhu haana-kupedza nyaya, everyone’s got their own opinion. asi, isu kunyange kutaura vakachengeteka, uye kana tiri - kwakakwana? Kuchengeteka kwechokufambisa chedu chakasarudzwa kunofanira kuuya nguva dzose pakutanga, uye tiri kuzvitaura nhasi. kazhinji, vanhu vanowanzofunga kutaura nyaya iyi zvakasiyana, zvichienderana yavo hwokufambira zvaunofarira. Uyezve, nhau zvatinonzwa pamusoro tsaona munyika chinhu, naizvo. Paunenge uchaita kashoma kunzwa paiva chitima kwendege kumwe, zvinoitika. Sezvahunongoita pamwe mhepo, motokari, bhazi uye nedzimwe nzira yokufambisa. kunyange zvakadaro, Nhamba dziri pachena - pamutemo, chitima ndeimwe zvikuru modes chokufambisa mazuva ano! The same level of safety goes for air traffic while all other means of transport come after.
Aihwa, hazvisi. Havasi njanji zvose uye zvitima zviri zvakafanana yepamusoro. Patinotaura pamusoro njanji pakufamba chengetedzo, isu kazhinji nezvazvo mumaratidzirwo zvimwe nyika. nyanya, njanji kufamba yakachengeteka chaizvo, but it still doesn’t harm to check the state of the country’s rails and connectivity if you want to travel by train.
Kana zvose railroads nezvitima tinonyatsokwanisa vatora kutarisirwa (i.e., aigara Serviced, akaramba, akatsiviwa kana zvichidiwa, nezvimwewo.), iwe unenge kashoma nokusingaperi vapupurire chero tsaona iyi kunoreva chokufambisa. Chimwe chikonzero ndechokuti, kusiyana mugwagwa kutakura, pane nzira imwe chete uye imwe nzira yekufamba (i.e., chitima) vachitevera mumwe nzira ayo kwavaiendeswa. No Motokari zvisingatarisirwi vari kuuya nzira yenyu, kuita iwe kuzvidzora pamusoro vhiri. Hapana kamwe inochinja uye majana, or other stressful and potentially dangerous situations. Izvi zvinogona kuva chimwe chikonzero nei chokufambisa nechitima akaramba mumwe zvikuru modes chokufambisa saka kure.
Kana tikaenzanisa njanji chete mugwagwa uye mhepo zvifambiso, isu taizoratidzira zviri nyore kuti Chitima ndeimwe yeiyo Akachengeteka Maitiro Ekufambisa asiwo zvimwe zvakawanda inogona kuenderera kupfuura chero imwe nzira yekufambisa. sei? Zvitima regai kubereka mazhinji CO2 choutsi, uye chitima choutsi zvisina kusunungurwa zvakananga muimba muchadenga. Uyezve, nezvitima murege kupedzana simba rakawandisa kana nzvimbo, uye avo ruzha mumatunhu vari vashoma pane dzimwe chokufambisa nzira. Vazhinji vanoziva eco vafambi vanosarudza zvitima zvevapfuuri senzira yavo yekufambisa yesarudzo. Vafambi akapoteredza Europe, wo, vanoda eco ushamwari nezvitima pamwe kwavo vakachengeteka nemishumo.
mazuva ano, apo munhu wose ari zvakapfuuridza nokuuruka yavo motokari chigaro dzavo cheya pabasa ndiEzekieri, kuva nenguva yekutonhorwa pakati ndiko crucial. Kuva mukana kuzorora muchitima sezvo iwe kuenda vachidzoka zvechokwadi ndeimwe zvikonzero zvakawanda nei vanhu vanosarudza nezvitima.
Achitaura-refu daro nezvitima, vari tarenda nezvechisarudzo kufamba sezvo vanobvumira vamwe downtime. Kuwana semaonero A anogumira B mu 2 Maawa nendege anoshanda, asi zviri ngozi utano hwako? Zvine dambudziko redu Blog romukova “Train ndiye Mumwe Of The zvikuru Modes Of Transportation”? Unogona kwako muviri uye pfungwa dzinoona zvachinja okunze, kumanikidzwa mumhepo, uye zvose zviri pakati? sanyanya. Ndokusaka kufamba kudzidzisa kumativi Europe inobvumira muviri wako kuti ujairire shanduko uye nekudzigadzirisa mu utano nzira.
Kwete chaizvo mumwe utano kana vakachengeteka kubatsira, asi mukwende kuchengeteka chinoita rakanaka rinokosha vamwe vanhu. Zvisinei kana iwe rongedza chiedza yokufamba kana kwete, uchida mikwende wako chimwe chidimbu. Vafambi Vazhinji vateresi zvinokosha zvinoratidza, zvidhori, zvinyorwa, nezvimwewo. and they want their memories with them. Zvinosuruvarisa, nendege inozivikanwa inozivikanwa yakarasika uye yakakuvadzwa mukwende izvo zvisingawanzo kuitika kana iwe uchifamba nechitima. Uyezve, mikwende wako nguva dzose newe, saka hapana anogona machira panguva mukwende murandu. Uyu chikonzero kutaura chitima ndechimwe zvikuru modes chokufambisa? Tinofunga saka.
#Fashoni nyoro ravel	#ngozi	#safetravel	#kutakura
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Dzidzisa Kufamba Holland, Chitima Kufamba The Netherlands, Famba Europe